कस्तो निर्दयी समाज हो यो? ! यस कारण गरिने रहेछ छोरीको योनी छेदन ? पढ्नुहोस – TAJA KHAWAR
कस्तो निर्दयी समाज हो यो? ! यस कारण गरिने रहेछ छोरीको योनी छेदन ? पढ्नुहोस
October 31, 2018 Taja Khawar एजेन्सी 0
भारत । महिलाको योनि छेदन गर्ने एक निर्दयी संस्कारलाई कानूनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएपनि अझै पनि विश्वका कतिपय देशहरुमा यो प्रचलन कायमै रहेको छ ।
भारतको एउटा सानो बोहरा मुस्लिम समुदायमा यो कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ । धेरै जसो मुस्लिम समुदायमा यो प्रथा कायम रहेको पाइन्छ। यसो गर्दा उनिहरुको देउता खुसी हुने र यसले भविस्यमा कुनै पनि असर नगर्ने कुराहरु समुदायभित्रै चर्चा हुने गरेको पाइन्छ। छोरा मानिसको लिङ्गको चर्म छेदन गर्नु र महिलाको योनि छेदन गर्नु अनिवार्य नै रहेको कतिपय समुदायमा छ। त्यस्तै बोहरा समुदायका महिलाहरुले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस कुसस्कारलाई हटाउन विभिन्न अभियान चालेका छन, तथापी यस कुप्रथामा कुनै कमि आएको छैन् । जसका कारण अधिकांश महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
‘हजुरआमाले मलाई एउटा पुरानो र जीर्ण भवनमा पुर्‍याएपछि भने मेरो मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि उनले मलाई एउटा कोठामा लगिन् । मलाई भुइँमा ओछ्याइएको एउटा कार्पेटमा बस्न लगाइयो ।
तत्कालै मेरो पाइन्ट खोलियो,’ सो घटनाबारे उनी बेलिबिस्तार लगाउछिन्, ‘उनले मेरो हात समाईन भने अर्की महिलाले खुट्टा । त्यपछि उनीहरुले मेरो योनी तन्काएर केही चिज काटे ।
विखण्डनकारीहरुको नागरिकता खारेज गर्न माग, सहमत हुने सबैले सक्दो सेयर गरौँ
सुरु भयो गौतमबुद्ध विमानस्थलको रनवे पिच गर्न, अब कति समय लाग्ला त उडान सुरु गर्नको लागि